Ny Herinandro Tao Amin’ny Bilaogy Boliviana – Maro an’Isa Tahaka ny Ahoana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2017 13:59 GMT
Ny Talata alina, nahita tampoka ny isa ilaina ny Senat Boliviana. Loholona mpanohitra maromaro no tsy nety nihaona ho fanoherana ireo volavolan-dalàna maromaro napetraky ny antokon'ny fitondrana MAS. Loholona mpanohitra telo fanampiny no nanapa-kevitra hanatrika ny fivoriana mba handatsa-bato ho an'ny governemanta. Nisy ny fihetseham-pahatezerana, satria nisy ireo niampanga ireo loholona ho nandray kolikoly mba hanova ny vaton'izy ireo. Voaraoka tao amin'ny antoko tsirairay avy izy ireo avy eo, araka ny nsoratan'i Miguel Buitrago tao amin'ny bilaoginy.
Na dia izany aza, iray amin'ireo olana goavana indrindra tsy vita ny resaka Antenimieram-Panorenana. Mihevitra ny governemanta fa tokony hankatoavin'ny maro an'isa tsotra ny andinin-dalàna, izay misy amin'izao fotoana izao. Raha nangataka ny mpanohitra fa tokony hajaina ny lalànan'ny Fampiantsoana ary tokony hajaina ny maro an'isa 2/3, izay manome antoka ny marimaritra iraisana sy ny fifampiraharahana mandritra ny fotoam-pivoriana. Bilaogera Sebastian Molina avy ao amin'ny Plan B (ES) nampiseho sary namboarin'ny vadiny, izay nilaza ity antso hanajana ny 2/3 maro an'isa ity. Naka ny sary ireo bilaogera hafa, tahaka an'i Andres Pucci. Nilaza izy fa na dia manana ny maro an'isa tsotra aza ny MAS ao aminy, tsy nahazo ny maro an'isa izy ireo tamin'ny fifidianana. Noho ireo vato tsy manankery sy vato fotsy, dia 42,2% fotsiny no azon'izy ireo.